That's so good, right?: အပြုံးလေး (တတိယပိုင်း)
ညနေခင်းလေပြေလေးက ညှင်းသဲ့သဲ့လည်းမဟုတ် အားရှိရှိတိုက်နေခြင်းလည်းမဟုတ်သာမန်တိုက်နေကျပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ် တည်ငြိမ် နေသည့် တေးသွားတစ်ပုဒ်လိုခပ်မှန်မှန်လေးတိုက်ခတ်လျှက်ရှိသည်။ လူတွေကလှပသည်ဟု တတွတ်တွတ်ပြောဆိုလေ့ ရြှိကသော ညနေခင်းအလြှကီးသည် ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်တော့ မတင်မကျကြီးဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော် သည်လိုညနေခင်းမျိုးကို မုန်းသည်။ မုန်း သည်ဆိုသည်ထက် သည်လိုညနေခင်းမျိုးမှ ရရှိလာတတ်သည့်ခံစားချက်မျိုးကြီးကို ရင်မဆိုင်ချင်သည်ဆိုလျှင် ပိုမှန်လိမ့်မည်ထင်သည်။ ညနေခင်းတစ်ခုရောက်တိုင်းဝင်တော့မည့် နေလုံးနီနြီကီး ကို တွေ့ မြင်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် ရိုက်ခတ်တိုးဝှေ့လာသည့် ခံစားချက်ြကီးကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နာမည်မဖော်တတ်သလို အဓိပွါယ်လည်းမသိပါ။ သို့ပေမယ့် ထိုသို့ ထိုညနေခင်းတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းညင်းပန်းနှိက်စက်နေကြသည်ပဲ။
စောစောက ခပ်မှန်မှန်လေးတိုက်ခတ်လျှက်ရှိသော လေကနည်းနည်းပြင်းလာကာ အနားရှိ ဗန်ဒါပင်ြကီးကို တွန်းတိုက်တိးု ဝှေ့လိုက် လေသည်။ ထိုအခါဗန်ဒါပင်ြကီးသည် တစ်ချက်လေးဘေးသို့ယိုင်ထိုးသွားကာ သစ်ရွက်ခြောက်တစ်ချို့ မြေကြီးပေါ်ကို ခါချလိုက်သလို လေနှင့်တလွင့်လွင့်ကြွေကျလာသည်။ ထိုသစ်ရွက်ကြွေလေးတွေသည် မြေပြင်ပေါ်သို့ နူးညံညင်သာစွာ ကျဆင်းလာကြပြီး မြေကြီး မျက်နှာပြင်နှင့် ထိခါနီး မှ ပင့်သက်ပွေ့လေတစ်ချက်ကြောင့် မွကနဲ လေထဲသို့ပြန်တက်သွားပြန်သည်။ ထိုလေကြမ်းတစ်ချို့ကြောင့် ကျွန်တော့်ဆံပင်တစ်ချို့ပင်ပုံစံပျက်ချင်သွားသည်။ ကျွန်တော် နဖူးထက်မှဝဲကျလာသော ဆံပင်စတွေကို သပ်တင်လိုက်သည်။
ညနေသုံးနာရီထိုးတော့မည်။ ခဏနေလျှင် ကျောင်းသွားနေသည့် ကျောင်းသားတွေအဆောင်ကိုပြန်လာ ကြတော့မည်။စာသင်ခန်းထဲတွင် တစ်ယောက်ထဲပျင်းရိစွာ ထိုင်နေရင်းမှကျွန်တော် တစ်ချက်သန်းဝေလိုက်ရင်း အကြောဆန့်ကာ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ဟန်ပါပါပြင်ဝတ်လိုက်သည်။ ဖရက်ရှာတွေကျောင်းဆင်းလာပါကရက်ပီတာတွေနှင့်ပေါင်းကာစာသင်ရတော့မည်။ ကျွန်တော်တော့မဟုတ် Physic ဆရာမတစ်ယောက်၏အချိန်ြဖစ်သည်။ လက်မှလက်ပတ်နာရီကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်းအပြင်ဖက်တွင် ခြင်းခတ်နေသည့် ရက်ပီတာကျောင်းသားတွေကို ခေါ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက၏် ။
”ဆရာလေးရေ ဆရာလေး လုပ်ပါဦးဆရာလေး ကျွန်တော့်ကို ဒီဆရာမက မတရားအနိုင်ကျင့်နေတယ်”
စာသင်ခန်းအပေါက်ဝအရောက် ရုတ်တရက်ပြေးဝင်လာသော ဇင်မင်းသူကြောင့်ကျွန်တော်ပင်လန့်သွားသည်။သူ့ လက်ထဲတွင်လည်း ခြင်းလုံးတစ်လုံးကို ကိုင်ထားသေးသည်။ ဇင်မင်းသူ၏ နောက်တွင်တော့ ဂိုက်ဆရာမလေးက သစ်သားပေတံကို ကိုင်ပြီး အူယားဖားယား ဖြင့်ပြေးလိုက်လာသည်။
”ဘာတွေဖြစ်လာတာလည်းကွာ ဖြေးဖြေးသက်သာပြောစမ်း ပါ ”
”အဲ့…………..အဲ့ …..အဲ့ဒီဆရာမပေါ့ဆရာလေးရာ ကျွန်တော့်ဖာသာကျွန်တော် ခြင်းခတ်နေတာကို ဇင်မင်းသူတဲ့ နေပူထဲမှာ ခြင်းမခတ်နဲ့တဲ့ အသားတွေမဲကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ သူနဲ့ဘာဆိုင်တာကျနေတာပဲ နော်ဆရာလေး”
”အမယ်လေးတော် ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး စကားကို ဗလောင်းဗလဲနဲ့ နေပူထဲမှာ ခြင်းမခတ်ဖို့ပြောတာ နင့်ကိုစေတနာနဲ့ ပြောတာဟဲ့။ စာသင်ချိန်နီးနေလို့ အတန်း ထဲဝင်ခိုင်းတာ ကျတော့ ငါ့ကိုဖုတ်လေတဲ့ငါးပိ ရှိတယ်လို့ တောင်မထင်ဘူး။ နင်တို့ယောကျာ်းလေးတွေက ပြောရဆိုရသိပ်ခက်တာပဲ ပါးစပ်နဲ့ ပြောရင် နားမထောင်ချင်ဘူး ပေတံနဲ့ပြောမှ နားထောင်ြကတာလေ”
”ကဲပါ ဆရာမကြီးရယ် ဆရာမကြီးကလည်း စိတ်ြကီးပဲ ဒေါသလေးဘာလေးလျှော့ပါဦး ဒေါသများရင် အပူတွေများလာမယ် အပူတွေ များလာရင် လူကိုလောင်မြိုက်လာမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရုပ်ကြီးကလည်းအဖွားကြီးလို အိုစာလာပြီး မျက်နှာမှာ တပ်ထားတဲ့ မျက်မှန်က ပါဝါတွေ ဒီဂရီတွေ တိုးလာလိမ့်မယ်။ စိတ်လျှော့နော် ”
ကျွန်တော့် စကားဆုံးတော့ သူမကကျွန်တော့်ကို မျက်စောင်း ထိုးသည်။ မျက်စောင်းကတော်တော်မကြည်သည့်မျက်စောင်း။ ကျွန်တော့်ကို အရှေ့မှကာပြီး အနောက်တွင် ပုန်းနေသည့်ဇင်မင်းသူက ခေါင်းလေးပြူကြည့်ကာ သူမကိုပြောင်ချော်ချော် လုပ်ပြနေသည်။ သူမကထိုအဖြစ်ကို ကြည့်ကာ မရိုးမရြွဖင့် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေသည်။ ဇင်မင်းသူကို ရိုက်လည်းရိုက်ချင်သည် ကျွန်တော်က ရှေ့က ကာဆီး ကာဆီးလုပ်နေသဖြင့် သူမမှာ အခက်တွေ့နေသည်။
”ပြောလိုက်ရင် အမြဲတမ်းသူ့တပည့်တွေ ဖက်ကပဲ ချစ်ရဲအောင် ချစ်ရဲအောင် နင်လည်းဆရာဖြစ်နေလို့သာရယ် သူတို့တွေနဲ့ အတူတူပဲ။ ဆရာကော တပည့်ကော မျောက်တွေကျနေတာပဲ။အမြဲတမ်း တပူးပူးတတွဲတွဲနဲ့ နင့်ကို ဘောဒ်ါအုပ်နဲ့ကိုတိုင်ဦး မယ် ကြည့်နေ”
”အလို မယ်မင်းကြီးမရယ် မြှားဦးကကျွန်တော့်ဖက်ကို လှည့်လာပါရောလား ခင်ဗျားလေးကလည်းဆရာမဆြိုပီး အိနြေ္ဒလေးသိက္ခာ လေးနဲ့နေမှပေါ့။ ဘယ်နှယ့် ကျောင်းသားတွေနဲ့ တရုန်းရုန်းတ၀ုန်းဝုန်းပြေးလိုက်လွှားလိုက်လုပေ် နရင် ခင်ဗျားလေးကို ဘယ်သူက ကြောက်တော့မှာ လဲ။ ကျောင်း သားတွေ မလေးစားတာလည်းမမြင်နဲ့လေ ပုံစံက………..”
”ချစ်ရဲအောင် နင်နော် ……….နေဦးနင့်ကို အန်တီနဲ့ကိုတိုင်မယ် ဒီကပြန်ရင်နင့်အိမ်ကို ၀င်ဦးမယ်။ သူများသားသမီးကို မိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောပါတယ်လို့။”
”တိုင်ပေါ့ကွာ တိုင် တိုင် တိုင် …………………..”
”တိုင်မယ် တိုင်မယ်……….ဟွန်း …………………..”
ထို့နောက်သူမ ဆောငြ့်ကီးအောငြ့်ကီးဖြင့် မျက်နှာ ကြီးစူပုတ်လျှက် မကျေနပ်မှုများစွာ မြိုသိပ်ကာကျွန်တော့်ရှေ့ မှ ထွက်သွားသည်။ တော်တော်မလွယ်သည့် မိန်းကလေးပါ။ သူမနှင့်ကျွန်တော်က ကျောင်းတက်စဉ်ကတည်းက ရင်းနီးခဲ့ကြသည်ဆိုတော့ သူမအကြောင်း ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိနေသည်။ သူမထွက်သွားတော့ အနောက်မှဇင်မင်းသူက ကျွန်တော့်ကို သိုင်းဖက်ကာ …..
” ဒါမှတို့ဆရာလေးကွ ဟား ဟား အဒဲ့ါကြောင့် ဆရာလေးကို ချစ်တာ”
အရှေ့မှ ခပ်လှမ်းလှမ်းကို မရောက်သေးသည့် သူမက ကြားသွားသည်ထင်သည်။ ရုတ်တရက်ခြေလှမ်းတွေကို ဆောင့်ရပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကာ မဲ့ကာရွဲ့ ကာဖြင့် ပြောသည်။
”ဆရာတပည့်နှစ်ယောက် လိုက်လည်းလိုက်တယ် လင်မယားတွေကျနေတာပဲ ”တဲ့။ သူမကတော့ မည်သို့ သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြောလိုက်သည်မသိပါ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်တော့ ရှတတကြီးဖြစ်သွားသည်။ ဇင်မင်းသူ ကြိုကည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးလျှက် မျက်ခုးံ ပငြ့်ပသည်။သူလည်းဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုသော ပုံစြံဖစ်သည်။ သူ့ကြိုကည့်ရသည်မှာ ထိုသို့ပြောသွားသည်ကို ကျေနပ်နေ သည့် ဟန်ပါပင်။ ဒီကောင်လေး ငါ့အပေါ်မှာ မရိုးတော့ဘူးထင်တယ် ဟူး……………………။
စာသင်ချိန်ရောက်သောအခါ ဆရာမရောက်လာသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းဆင်းလာသော ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနှင့် အပြင်ဖြေ သမားတွေကို ရောကာ စာသင်လေတော့သည်။ ကျွန်တော်ကတော့အားနေသောကြောင့် ဘေးနားကနေထိုင်နေရင်း ကျောင်းသားတွေ စာသင်နေသည်ကိုငေးမောနေမိသည်။ ခဏနေတော့ အိမ်သာတက်ချင်လာ သလိုလိုဖြစ်လာသဖြင့် အိမ်သာရှိသည့် အဆောင် နောက်ဖေးပေါက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ အဆောင်၏ယောကျာ်လေး အိမ်သာသည်တစ်လုံးတည်းသာရှိသည်။အဆောင်တွင်ကျောင်းသား နည်းသောကြောင့် အိမ်သာတစ်လုံးဖြင့်သာလုံလောက်ပါသည်။ ယောကျာ်းလေး အိပ်ဆောင်ကိုပတ်ကာ အဆောင်နောက်ဖေးသို့ ကျွန်တော်လျှောက်လာခဲ့သည်။ ထမင်းစားဆောင်ဘေးရှိ ထင်းပြုံကီးကို အနည်းငယ်ကျော်လိုက်သောအခါအိမ်သာနားသို့ ရောက်လာ သည်။
ကျွန်တော်အိမ်သာနားသို့ တစ်ဖြေးဖြေးလျှောက်လာခဲ့သည်။ အိမ်သာနားသို့ရောက်သောအခါ အိမ်သာနံဘေးရှိ အထက်လေပေါက်မှ မီးခိုးငွေ့တစ်ချို့ကိုတွေ့ လိုက်ရသဖြင့်ခြေလှမ်းတွေတုန့်ဆိုင်းသွားသည်။ ထို့ နောက်မျက်မှော င်ကျူံ့ ကာ စဉ်းစားကြည့်သည်။ အိမ်သာတံခါးကိုကြည့်လိုက်တော့ လော့ချမထားပါ စေ့ရုံသာစေ့ထားသည်။ ကျွန်တြော်ကည့်ရင်းသဘောပေါက်သွားသည်။ ကျောင်းသား တစ်ယောက် ဆေးလိပ်ခိုးသောက်နေတာ ဖြစ်ရမည်။ ခြေသံကိုလုံနိုင်သမျှလုံအောင် လျှောက်လာရင်း အိမ်သာအနားနားသို့ အသာ ကပ်လိုက်သည်။ သူခိးု ဖမ်းရသလိုနည်းနည်းတော့ ရင်ခုန်စရာကောင်းနေသည်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပဲ ရယ်ချင်လာသဖြင့် ရယ်ချင်စိတ်ကို မနည်းမျိုသိပ်ထားလိုက်သည်။ ထို့ နောက် အသက်ကို မှန်မှန်ရှုကာ ခေတ္တမျှငြိမ်နေလိုက်ပြီး စေ့ထားသော တံခါးကို အသာလေး လက်ြဖင့်ကိုင် ကာ ဆောင့်တွန်းထည့်လိုက၏် ။
”ကျွ…ီ …………………၀ုန်း …………………………………..”
”ဟို………ဟိုဒင်း………..ဆေး…အဲ့ သေးပေါက်မလို့လေ ဆရာလေးရဲ့။ ဘာဖြစ်လို့ အိမ်သာတံခါးကို မပြောမဆိုနဲ့ ဖွင့်လိုက်တာတုန်းဗျ။ လန့်သွားတာပဲ ဟူး …………..”
ကျွန်တော်သူ့ကို မျက်လုံးဖြင့် တစ်ချက် စေ့စေ့စပ်စပ်ြကည့်လိုက်သည်။ လက်တစ်ဖက်ကအနောက်သို့ ဖွက်ထားပြီး မျက်လုံးမှာ မလုံမလြဲဖင့် ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ဟြိုကည့်သည်ြကည့်လုပ်နေသည်။ အခုမှသေချာကြည့်မိသည် သူဘောင်းဘီကိုဇစ်ဖွင့်ထားသည်။ ဘောင်းဘီကြယ်သီးကိုဖြုတ်ထားပြီး ဇစ်ကတစ်ဝက်ခန့်လျှောနေသည်။ ဘာတွေများလုပ်နေသည်မသိပါ။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို အကြည့်လွှဲလိုက်၏။
”ဇင်မင်းသူ မင်းအနောက်က လက်ထဲက ဘာလဲ ငါ့ကြိုပ မင်းအိမ်သာထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာငါသိတယ်နော်”
သူ့မျက်နှာ က အပြစ်လုပ်မြိပီး မကျေနပ်သည့်ကလေးတစ်ယောက်လို မျက်လွှာချထားပြီး တွန့်ဆုတ်တွန့် ဆုတ်ဖြင့် အနောက် တွင်ဖွက်ထားသည့် မီးသေနေသည့် ဆေးလိပ်တိုကိုကျွန်တော့်ကိုပေးသည်။
”ဇင်မင်းသူရာ ဆေးလိပ်တွေတော့ မသောက်ပါနဲ့ကွာ။ ဒါလက်တည့်စမ်းရမယ့် အရာမဟုတ်ဘူးကွ။ ဆေးလိပ်ကြောင့်လူတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေကြရလဲ မင်းသိလား။ ဆေးလိပ်ထဲမှာလူကိုကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ဘယ်နှစ်မျိုး တောင်ပါတယ်ထင်နေသလဲ။ ”
”ဆရာလေးရယ် ကျွန်တော်နောက်ကို မသောက်တော့ပါဘူး ဘောဒ်ါအုပ်နဲ့တော့ မတိုင်ပါနဲ့ဗျာနော်။ မကောင်းမှန်းတော့ ကျွန်တော်သိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဟ…ို …..ကျွန်တော် စိတ်……….”
”ကဲပါကွာ မင်းဆင်ခြေဆင်လက်တွေကို နောက်မှပေးတော့ စာသင်နေတုန်းကြီးကို နောက်ကိုဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ မြန်မြန်သွားတော့။ ဟိုမှာ ဆရာမသင်နေတာ ဘာမှန်းမသိလိုက်ပဲနေလိမ့်မယ်”
”ဆရာလေး ဘော်ဒါအုပ်နဲ့ တိုင်မှာ လား”
”မတိုင်ပါဘူး မင်းသာ နောက်ကိုထပ်မသောက်နဲ့တော့။ မင်းငါ့စကားကို နားထောင်မယ်မဟုတ်လား”
သည်တော့ သူ့ မျက်နှာလေးပြုံးလာသည်။ ထို့နောက် အပြင်ဖက်ကို လူရိပ်လူခြေခဏလှမ်းကြည့်လိုက်ြပီး အိမ်သာတံခါးကို ဆွဲစေ့လိုက်ကာ လော့ချလိုက်၏။
သူကျွန်တော်မေးတာကို မဖြေပါ အပြုံးဖြင့်သာ တုန့်ပြန်သည်။ ထို့နောက် သူ့ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်ထဲမှ တစ်စုံတစ်ခုထုတ်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို ပေးသည်။
”ဘာကြီးတုန်း ဆေးလိပ်လား။ ဘာလဲငါ့ကိုပါဆေးလိပ်သောက်ဖို့ စည်းရုံးမလို့လား”
”မဟုတ်ပါဘူး ဆရာလေးရယ် သေချာကြည့် ဟောဒီမှာ ………………………”
သူစက္ကူဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီး အထဲမှ ပစ္စည်းကို ကျွန်တော့်ကိုထုတ်ပေးသည်။ သည်တစ်ခါလည်းဘာတွေထပ်ပေးဦးမည် မသိပါ။ အထဲမှာ ပစ္စည်းထွက်လာသောအခါ ကျွန်တော်ရယ်ချင်သွားသည်။ ကလေးတွေ စားသည့် lollipop ချိုချဉ်လေး……………
“ဒါကျွန်တော့်ကို ဘောဒ်ါအုပ်နဲ့မတိုင်လို့ ဆရာလေးကိုကျွေးတာ လဘ်ထိုးတာ မဟုတ်ဘူး နော်။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ။”
ကျွန်တော် သူပေးသည့် lollipop လေးကို စေ့စပ်စွာ ကြည့်လိုက်သည်။ အလယ်တွင် အနီရောင်အရစ်လေးပါရှိပြီး အစိမ်းရောင် အပြာရောင်တွေကို ဘေးမှ စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာ န်ပတ်ပြီးဆေးချယ်ထားသည်။
”ကလေးကလားကွာငါက ဒီအသကဒ်ီအရွယ်ရောက်မှ လော်လီပေါ့ စားရဦးမှာ လား”
”ဆရာလေးကလည်း ဒါရိုးရိုး lollipop မဟုတ်ဘူးဗျ အင်္ဂလန်ကလာတဲ့ lollipop ။ မြန်မာပြည်မှာမရောင်းဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်အမကို ကြိုက်နေတဲ့ ငနဲက လက်ဆောင်လာပေးသွားတာ။ ပြီးရင် အိမ်မှာ salmon ငါးတွေရှိသေးတယ်။ ဘရာဇီးလ် latte coffeeလည်းရှိတယ်။ ဒီလိုလုပ် မနက်ဖြန်နေ့လည်ကျရင် နေ့လည်စာကို ဆရာလေးကျွန်တော့် အိမ်မှာ လိုက်စားပါလား။ ဆရာလေးကိုကျွေးချင်လို့ပါ။”
”မင်းငါ့ကြိုကွားနေတာလား ဒါမှမဟုတ် ဖားနေတာလား”
”ဟား ဟား ဖားတာမဟုတ်ပါဘူး ဆရာလေးကို ကျွန်တော်က စေတနာရှိလို့။ ကျန်တဲ့သူတွေဆို
တောင်းစားရင်တောင်မကျွေးဘူး။ လိုက်ခဲ့ပါဗျာ နော် လိုက်ခဲ့မယ်မဟုတ်လား”
”အေးပါ လိုက်ခဲ့ပါ့မယ် ဒါနဲ့ မင်း ………………….”
ကျွန်တော် သူ့ ဘောင်းဘီ ဇစ်မတတ်ရသေးသည်ကို ကြည့်ပြီး တစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့ကို မျက်လုံးဖြင့် မေးငေါ့ပြသလို စိုက်ကြည့်ပြလိုက်သည်။
”ဟာ…………….ဆရာလေး ကျွန်တော့်ကို ခိုးကြည့်နေတာလား။ ကျွန်တော်တောင် မေ့နေတာတော်သေးတယ် ဒီအတိုင်းကြီး ထွက်သွားတော့ မလို့ ဟီးဟီး ”
”ကြည့်လည်းလုပ်ဦး အပြင်ရောက်မှ အရှက်ကွဲနေဦးမယ်။ ကဲအိမ်သာထဲမှာအကြာကြီးနေလို့ မကောင်းဘူး သွားရအောင်။ တြော်ကာ တစ်ယောက်ယောက်ြမင်သွားရင်တစ်မျိုးထင်နေဦးမယ်။”
ကျွန်တော့်စကားဆုံးတော့ သူဘောင်းဘီကိုမကာ ဇစ်ကဆွဲတင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် တစ်ခုခုကိုသတိရသွားဟန်ဖြင့် မတင်ထားသွားဇစ် ကြိုပန်ဆွဲချလိုက်ြပန်သည်။
”ဆရာလေး ဒီမှာကြည့် ဆရာလေးနဲ့ ဆင်တူဘောင်းဘီလေးလေ အခုကျွန်တော်ဝတ်ထားတယ်”
ကျွန်တော်သူပြသည့်နေရာကို ကြညလ့်ိုက်မိသည်။ ဘောင်း ဘီလေးက ကျွန်တော့်ကိုပေးသည့်ဘောင်းဘီလေးနှင့် ပုံစံတူဖြစ်ြပီး အရောင်တော့ကွဲသည်။ မျှြော့ကိုး ရှုံ့ရှုံ့လေးအောက်တွင် ကြောင်ရုပ်နှာ ခေါင်းလေးကို တွေ့ရသည်။ ထိုအထက်တွင်တော့ တင်းရင်း နေသည့် သူရဲ့ပေါင်တံသားလေးကိုအတွင်းခံနှင့်ထပ်လျှက်တွေ့နေရသည်။ ထို့ထက်နည်းနည်း အထက်တွင်တော့ ပြောင်ချောနေသော ဗိုက်သားပြင်နှင့် ချက်အောက်ရှိ စီတန်းနေသောမွှေးညှင်းလေးတွေကိုအသည်းယားဖွယ်ရာ မြင်နေရသည်။ ကျွန်တော် တံတွေးတစ်ချက် သူမမြင်အောင် မျိုချလိုက်သည်။ကျွန်တော့်မှာ ဒုက္ခငရဲတွင်းထဲ ရောက်နေသူတစ်ယောက်ပမာ နေရထိုင်ရခက်နေသည်။ သူကျွန်တော့်ကို ဘာသဘောနှင့် ဒီလိုလုပ်ပြနေရပါသနည်။ သဘောရိုးနဲ့လား ဒါမှမဟုတ် တမင်သက်သက်လုပ်ပြနေသည်လား။ ဒီကောင်လေးတော့ မလွယ်ပါ ဆရာကို အိနြေ္ဒပျက်အောင်လုပ်နေသည်။
”ရပြီ ရပြီ ဒီထက်တော့ အောက်ဆက်မလျှောပါနဲ့တော့ မဖွယ်မရာတွေ တွေ့နေရတော့မယ် ”
”ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ရှိပါတယ် ဆရာလေးရဲ့။ ကြည့်မလား ကျွန်တြော်ပမယ”်
ကျွန်တော်မျက်နှာ ကို သူ့ရှေ့မှ လွှဲလိုက်ပြီး တစ်ဖက်သို့လှည့်လိုက၏် ။ မဖြစ်တော့ ဒီအထဲမှာဆက်နေလျှင် မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မည်။ ကျွန်တော် ကလည်းထိုကိစ္စမျိုးကိုအလွန်အရှက်အကြောက်ြကီးသည်။ အဲ……….မကြိုက်ဖူးလား ဆိုတော့ လည်းမဟုတ်၊ကြိုက်တြော့ကိုက်သည်။ သို့ ပေမယ့် ယခုကဲ့သို့ အခြေနေနှင့် အချိန်ခါမျိုးမှာ တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးဟုယူဆသည်။ ထို့ ကြောင့် မိမိစိတ်ကို တက်နိုင်သမျှ ထိန်းထားရမည်။
”ခဏနေဆရာမ အချိန်ပြီးတော့မယ် မြန်မြန်သွားတော့။ ငါစာအုပ်တွေစစ်စရာရှိသေးတယ်”
”ဟား ဟား ဆရာလေး ရှက်သွားပြီ။ အလကားစတာပါဗျာ”
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူကျွန်တော့်နားသို့ ကပ်လာသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်မျှစောင်းငဲ့ကြည့်ပြီး အိမ်သာတံခါးကို ဖွင့်ကာ ထွက်သွားသည်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲအိမ်သာထဲတွင်ကျန်ခဲ့၏။ လက်ထဲမှ သူပေးခဲ့သည် တုတ်ထိုးချိုချဉ်ခေါ် lollipop လေးကို ကြည့်ရင်းဟက်ဟက်ပက်ပက်ပြုံးလိုက်မိသည်။
တိမ်တိုက်တွေ ငိုတဲ့အခါ …….ညနေခင်းတွေ ရှိုက်တဲ့အခါ…………….
ကျွန်တောရ့် င်ထဲ အနာရှိုနတ် က်ကာ နှလုံးသားမှာ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်တွေ……ပန်းထွက်လာသည်
အချိုသတ်ထားတဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုကို စားသုံးမိတဲ့ အချိန်မှာ တော့
ကျွန်တော်ဟာ အချစ်ရဲ့လက်ပါးစေ ဖြစ်မှန်းမသြိဖစ်နေတယ်ဆိုတာကို
ဒီနေ့ ကျွန်တော် ရေမိုးချိုးပြီးသည်နှင့် သေတ္တာ ထဲမှ စိတ်တိုင်းကျ အ၀တ်စားတစ်စုံကို ရွေးချယ်ရင်းအချိန်နည်းနည်း လင့်သွားသည်။ အ၀တ်စားက တစ်ကယ်တန်းဝတ်မည်ဆိုမှ စိတ်နှင့်ကိုယ်နှင့်မကပ်သည့် အ၀တ်စားတွေသာ တွေ့ နေရသည်။ နောက်ဆုံး အကောင်းဆုံးနှင့် စိတ်အကပ်ဆုံးတစ်စုံအဖြစ် ချည်ဆွဲသား င်္အကျီလည်ဝိုင်းကလေးကို ၀တ်ပြီး အပေါ်မှ လက်ရှည်အကွက်တစ်ထည်
ကိုထပ်လိုက်သည်။ မှန်ထဲတွင်တော့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တြော်မင်နေရသည်မှာ သိပ်တော့ အံဝင်ဂွင်ကျမဖြစ်ချင်သေး။ သို့ ပေမယ့် အချိန်ကနောက်ကျနေပြီမို့ ထွေထွေထူးထူး ပြန်ပြင်မနေတော့ပဲအပြင်ဖက်တွင် လှန်းထားသည့် ခြောက်ကာစ ဂျင်းဘောင်း ဘီတစ်ထည်ကို ကောက်စွပ်ပြီးအိမ်မှထွက်လာခဲ့သည်။
လောလော လောလောဖြင့်ထွက်လာခဲ့သဖြင့် လက်ပတ်နာရီပတ်လာဖို့လည်းမေ့သွားသည်။စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ဖုန်းကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်မေ့ခဲ့သည်။လက်တစ်ဝက်ရောက်မှ သတိရသဖြင့် ဆိုင်ကယ်ကို နောက်ြပန်လှည့်မနေတော့ပဲ အရှေ့ကိုသာ
ဦးတည်ပြီးမောင်းလာခဲ့သည်။ နေကခြစ်ခြစ်တောက် ပူနေသဖြင့် ကျွန်တော် ချွေးတြွေပန်ချင်လာသည်။၀တ်လာသည်က ဂျင်းဘောင်း ဘီ င်္အကျီကလည်းနှစ်ထပ်။ မတက်နိုင်။ နေပူမှာ ကြောက်လျှင်တော့သည်လောက်တော့ခံရပေဦးတော့မည်။ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ တ၀ီးဝီးဖြင့် ရှုပ်ရှုက်ခတ်နေသည့်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သတိထားရင်း ဆိုင်ကယ်ကို ထိန်းမောင်း လာခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့
လူတွေရှုပ်ထွေးများပြားနေခြင်းက မျက်စိနောက်စရာကောင်း လောက်အောင် စိတ်ရှုပ်စေသည်။အတန်ငယ် ကြာမောင်းလာခြဲ့ပီးနောက် လမ်းချိုးတစ်ခုထဲသို့ ကွေ့ဝင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ဆိုင်ကယ်ကို စက်သက်လိုက်ကာ ခြံဝန်းတံခါးရှိ ချိတ်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်ကို
မေးသိုင်းကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကို ချွတ်လိုက်ကာ အိမ်လေးကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်သည်။ အိမ်လေး၏ ပုံစံနှင့်ူlandscape ကြိုကည့်ရသည်မှာ တော်တော်လေး ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီး romantic ဖြစ်လွန်းသည်။ ဤအိမ်လေးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
ငွေကြေးအသင့်အတင့် ချမ်း သာသည့် မိသားစုတစ်ခုနေထိုင်နေသည်ကို မပြောပဲနှင့်သိနိုင်သည်။ ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ်ကို ဒေါက်ထောက်ထားလိုက်ပြီး ခြံတံခါးနားသို့ ကပ်သွားကာ လူခေါ်ဘဲလ်ကိုနှိပ်ြပီးခေါ်လိုက်သည်။
ခဏကြာတော့ အိမ်တံခါးမကြီး ပွင့်လာပြီး အတွင်းမှ quarterဘောင်းဘီ အတိုနှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ထွက်လာသည်ပဲ။ သူ…..သူကျွန်တော့်ကြိုမင်သော အခါအပြုံးဖြင့် ဆီးကြိုသည်။ ကျွန်တော့်ကိုမြင်လျှင် အမြဲတမ်း အပြုံးတစ်ပွင့်ဖန်ဆင်းတတ်သည်က သူ့အကျင့်လား မသိပါ။ သို့မဟုတ်တမင်လုပ်ယူနေတာများလား။
”ဆရာလေး ရောက်လာသားပဲဗျ။ ကျွန်တော်က ဆရာလေးလာမှလာရဲပါမလားလို့”
”မလာရဲဘူးထင်နေလို့လား ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ငါမလုပ်ရဲတာ ဘာမှမရှိဘူး။ အထူးသဖြင့် ငါအလေးပေးပြီးဂရုစိုက်တတ်တဲ့ အရာတွေဆိုရင် ငါကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်”
”ဟုတ်ပါပြီ ဆရာလေးရယ် က…ဲ …………အိမ်ထဲကိုလာလေ။ ဆိုင်ကယ်ပါတစ်ခါတည်း သွင်းလိုက်။အိမ်ထဲမှာ အဖေရှိတယ်။ အဖေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်”
”မင်းအဖေကို ငါနဲ့ဘာလုပ်ဖို့ မိတ်ဆက်ပေးမှာ လဲ။ ဟို……….ငါက မသိရင် ကိုယ့်ယောက္ခမကိုလာတွေ့တာနဲ့ တူနေဘူးလား”
”အဖေနဲ့ မတွေ့လို့ မဖြစ်ဘူး ဗျ။ ဆရာလေးကို အိမ်ကိုရောက်အောင်ခေါ်ခိုင်းတာကျွန်တော့်အဖေကိုယ်တိုင်ပဲ။”
” က…ဲ …….နေပူပါတယ်ဗျာ။ လာပါ………..အိမ်ထဲရောက်မှ ဆက်ပြောကြရအောင်။”
ကျွန်တော် ဘာမှပြောမနေတော့ပဲ သိချင်စိတ်ကိုမျိုသိပ်ကာ ဆိုင်ကယ်ကို သူဖွင့်ပေးသည့်ခြံတံခါးပေါက်မှ တွင်းပြီး ၀င်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရှေ့သို့ရောက်သောအခါ ဆိုင်ကယ်ကိုဆင်ဝင်အောက်နားတွင် ဒေါက်ထောက်ကာ ရပ်ထားလိုက်သည်။ အိမ်ထဲသို့ဝင်ရန် တံခါးပေါက်သို့ရောက်သော်။ ကျွန်တော်ဖိနပ်ချွတ်ရန် ဒူးခေါင်းကိုကွေးချလိုက်သည်။ ထို့နောက် သိုင်းချည်ထားသည့်
”အိမ်ထဲဝင်မှာ ဆိုတော့ ဖိနပ်ချွတ်မလို့လေ”
”မချွတ်ပါနဲ့ ဗျာ ချွတ်စရာမလိုပါဘူး ကျွန်တော်တောင် စီးထားတာမမြင်ဘူးလား”
သူ့ခြေထောက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်သည်။ သူဖိနပ်ချွတ်မထားပါ။ ထို့နောက်သူ ဒူးခေါင်းကိုကွေးညွတ်လိုက်ြပီး ကျွန်တော်နားသို့ လာထိုင်လိုက်သည်။ ပြေနေသည့် ဖိနပ်ြကိုးတွေကိုကိုင်ထားသည့် ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူ့လက်ကလေးနငှ့်ဖယ်လိုက်ြပီး ကျွန်တော့်ကိုဖိနပ်ြကိုးချည်ပေးသည်။ သူ့ ရဲ့ ရုတ်တရက် အပြုအမူကြောင့် ကျွန်တော် ကြက်သေသေသွားသည်။ ဘာပြောရမှန်းလည်း မသိတော့။ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း လဲမသိတော့ပါ။ သူကျွန်တော့်ကိုဖိနပ်ြကိုးချည်ပေးနေသည်ပဲ။ ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်နေသည် များလား။
”ရပြီ ဆရာလေး အထဲဝင်ရအောင်”
အိမ်တံခါးမကြီးကို တွန်းပြီးအထဲကို ၀င်လိုက်သည်နှင့် အေးစိမ့်နေသော လေအေးပက်စက်လေတွေက ကျွန်တော့်မျက်နှာ တစ်ဝိုက်ကို ရိုက်ခတ်သွားသည်။ အိမ်ထဲကို မျက်စိတဆံုး လှည့်ပတ်ြကည့်ရှု လိုက်၏။လှလိုက်သည့် အိမ်ကလေး။ Interior Design နဲ့ Decoratoin မှာ တော်တော်လေးကိုကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိသည်။ ထို့နောက် ပြတင်းပေါက်ရှိ ခန်းစီး နားတွင်လည်း ဟောင်းလောင်းပေါက်လေးထောင့် သစ်သား ဘီရိုလေးတစ်ခုရှိကာ ထိုအထဲတွင် Indoor plantလေးတွေကိုစိုက်ထားသည်။ ထိုအနားမှ ဖြတ်သွားသောအခါ ပန်းပင်လေး တွေကိုကျွန်တော်သေချာကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်မှန်းတာ မလွဲဘူးဆိုလျှင်တော့ Moth Orichid လေးတြွေဖစ်မည်ထင်သည်။ အခန်းထောင့်တစ်နေရာတွင်တော့ အမြင့် ၁၂ ” လက်မခန်ရှိပြီ့း Indoor plant တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Angel ivy ကိုကြွေပန်းအိုးကြီးနှင့်စိုက် ထည့်ထားသည်။ ကြမ်းပြင်တွေကလည်း မနင်းရက်စရာ Liminated Floor အမျိုးအစားကို ခင်းထားသည်။ ကျွန်တော့် အတွက် အားလုံးကရင်သပ်ရှုမော အြံသဖွယ်ရာတွေချည်းပါပင်။ ကျွန်တော်အရင်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးသည့် Lake Front House (ရေကန်ကို မျက်နှာ မူထားသည့်အိမ်) လေးကိုပင် မလိုချင်တော့သလိုလြိုဖစ်လာသည်။
ဇင်မင်းသူတို့ အိမ်တွင် အနုပညာဆန်သည့် အိမ်သားတစ်ဦးတော့ ပါကိုပါရမည်ဟုကျွန်တော့်ခန့် မှန်းမိသည်။ ကျွန်တော့်၏စိတ်ကို သိနေသည့်အလား ဇင်မင်းသူထံမှ ကျွန်တော်မမေးပဲစကားသံတွေထွက်လာ၏။
”ဒီအိမ်လေးက ကျွန်တော့်အမလက်ရာပေါ့ ဆရာလေးရာ။ ကျွန်တော့်အမက သိပ်ြပီး esthetical ရှိတာဗျ။ အခုတော့ အိမ်မှာမရှိဘူး မြို့ထဲက သူ့အလှပြင်ဆိုင်မှာ ဒီအချိန်ဆိုအလုပ်တွေရှုပ်နေလောက်ပြီ။အမက ကျွန်တော့်ကို သိပ်ဂရုစိုက်လွန်းတယ်။ ဒီအသက်ဒီ
အရွယ်ရောက်တဲ့ အထိအ၀တ်အစားကို သူဆင်ပေးတာပဲ ၀တ်ရတယ်။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကို ၀တ်ခွင့်မရှိဘူး။ ပြီးတော့အမက ကလေး ကလားဆန်တာမျိုးသိပ်မကြိုက်ဘူး။ ကဲဟိုမှာ အဖေစောင့်နေတယ် သွားရအောင်”
ဧည့်ခန်းထဲသို့ ရောက်သောအခါ အသက်လေးဆယ်ခန့်လြူကီးတစ်ဦးက မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သည်လြူကီးကို ကျွန်တော်မြင်ဖူးပါသည်။ ဇင်မင်းသူ အဆောင်စအပ်သည့်နေ့ကဇင်မင်းသူ၏ ဖခင်ဆိုသူပင်ြဖစ်သည်။ ဤမျှလောက်နေနိုင် ထိုင်နိုင်သော သူတို့သည် ဘာဖြစ်၍များသေးသိမ်နုံချာသည့် ကျွန်တော့်ဆရာ့အဆောင်တွင် ရောက်လာသည်မသိပါ။ သည်မြို့တွင်ကျွန်တော်တို့ အဆောင်ထက် မြောက်များစွာ ဈေးကြီးပြီးအဆင့်တန်းမြင့်သည့် အဆောင်ပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ အင်း …………ကိုယ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူးလေ။
”လာကြဟေ့သားတို့ လာ………………….ထိုင်ြက။ သား သူသူက သားရဲ့ဂိုက်ဆရာလေးအတွက်သောက်စရာတစ်ခုခုလောက် ယူပေးလိုက်လေ”
ကျွန်တော်ကို ပြုံးကြည့်ပြီး ဇင်မင်းသူက အိမ်နောက်ထဲ ကိုဝင်သွားသည်။ ကျွန်တော် သူ့အဖေပြသည့်ဆိုဖာပေါ်တွင် အသာကျုံ့ကျုံ့ လေးဝင်ထိုင်လိုက၏် ။ ဆိုဖာကြီးက ထိုင်လိုက်သည်နှင့်လူတစ်ဝက်လောက် မြုပ်ဝင်သွားသည်။ ကျွန်တော်နေရထိုင်ရခက်ကာ ရေပဲငတ်သလိုလိုဗိုက်ပဲဆာသလိုလို အိမ်သာတက်ချင်သလိုလြိုဖစ်နေသည်။ ဇင်မင်းသူ၏အဖေက ကျွန်တော့်ကို ကြညြ့်ပီး
”သားကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စက ဒီလိုသားရဲ့။ ဦးသားက အခုဆယ်တန်းဆိုတော့ နည်းနည်းဂရုစိုက်မှတန်ကာကျမယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ဦးမှာ ကလည်း အလုပ်ကိစ္စတွေ ပွဲရုံကိစ္စတွေက တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့နပန်းလုံးနေရတာနဲ့ ဦးသားကို လှည့်မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူ့အမကလည်းအလြှပင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ အလုပ်ကမိုးလင်းကနေ မိုးချုပ်တစ်နေကုန်နီးပါးပဲ။ တစ်ခါတစ်လေဆိုညဥ့်နက်မှ အိမ်ြပန်ရောက်တယ်။ ဒီတော့ ဦးတို့မှာ သားကိုဂရုစိုက်မယ် ဆိုတာစိတ်ပဲ ရှိတယ်ဘာမှလက်တွေ့မလုပ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဦးတို့က အချိန်ပြည့်မကြည့်နိုင်တော့ ဒီကောင်ကအရမ်းပေါ့လာတယ်။ စာလည်းမှန်မှန်မကျက်ဘူး။ သူလုပ်ချင်လာ လုပ်နေတော့တာပဲ။
တစ်ခါတစ်လေဆို အိမ်ကနေ ညကြီးမင်းကြီးလည်း ထွက်သွားတာပဲ။ အဒဲ့ါသားရယ်……………..ဟ.ို .လေ”
”ပြောမှသာပြောပါဦး ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ ဦးကျွန်တော့်ကို ခေါ်တယ်ဆိုတာ ခဏတုန်းကမှကျွန်တော်သိရတာပါ။ ဇင်မင်း သူက ကျွန်တော်ကို အလည်ပဲခေါ်သလိုလို ထမင်းစားပဲဖိတ်သလိုလိုနဲ့ခေါ်ထားတာဗျ”
”အဒဲ့ါသာ ကြည်တော့သားရေ။ ဒီကောင်က မိတဆိုးလေးလြဲဖစ် အိမ်မှာ အငယဆ်ုံးလဲ ဖြစ်ဆိုတော့ ဦးတို့နည်းနည်း အလို လိုက်ထားရတယ်။ သားကိုပြောမယ်ဆိုတာက တစ်ကယ်လို့ သားအနေနဲ့အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် ဦးရဲ့ သားကို အိမ်မှာ စာကျက်ချိန်တွေ စာလုပ်ချိန်လေးတွေကို အနီး ကပ်ကြည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်တဲ့သဘောမျိုးပါ။ သားက အဆောင်က guide တစ်ယောက်ဆိုတော့
သားအတွက် အခက်အခဲရှိမယ်မထင်ဘူး။ နောက်ပြီး ဦးရဲ့သားအတွက်ပေးရတဲ့ အချိန်တွေအတွက် ဦးကသားကို အဆင်ပြေစေ လောက်မယ့် အခကြေးငွေပေးပါ့မယ်။ တစ်ကယ်လို့သားသဘောတူမယ်ဆိုရင်ပေ့ါ”
”Sorry သား ဦးနည်းနည်းလောဘကြီးသွားသလိုများဖြစ်နေလားမသိဘူး။ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ချိန်တွေကို ဦးဇွတ်အတင်းယူဖို့ ကြိုးစားနေသလြိုဖစ်သွားတယ်”
”ဟာ………..အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် မှာ ကအမေတစ်ယောက်ထဲရှိတာလေ။ အဒဲ့ါကြောင့်ကျွန်တော်က ဘာပဲလုပ်လုပ် အမေ့ကိုအသိပေးချင်တာမျိုးလေးပါ။ အမေမသိပဲ ကောင်း တာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေ ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ချင်ဘူးဗျ။ အခုဦးပြောတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်အမေကိုအရင်ပြောကြည့်ပါရစေ။ အမေကခွင့်ပြုမှာပါ။ ကျွန်တော့်သဘောက တော့လုပ်ပေးဖို့
အဆင်သင့်ပါပဲ။ ပြီးတော့ဇင်မင်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေလို ခင်ခင်မင်ခင်ရင်းရင်းနီးနီးဖြစ်နေတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဦး ”
”အေးကွယ် မိဘစကားနားထောင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဦးသားနဲ့တော့ ဆီနဲ့ရေလိုပဲ။ သားအမေကခွငြ့်ပုပေးလိမ့်မယ်လို့ ပဲဦးမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဦးတို့အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်ဖြောင့်မှာ သားရဲ့။ဦးသားကိုလေ ပြောလို့မရရင်နားအုံသာကျင်းပစ်လိုက်။ ဦးစိတ်မဆိုးဘူး မနှစ်ကလည်းဒီကောင်ဒီလိုနဲ့ ပဲကျနေခဲ့တာ။ သားကိုဦးက ကျန်းမာရေးကြောင့်နားရတယ်ဆိုတာ သူ့ကအဲ့လို ညာခိုင်းလို့ဦးမှာ ပြောရတာ။ စာမေးပွဲကျတော့ အောင်အောင်မဖြေပဲနဲ့ သူများကဲ့ရဲ့မှာ တော့ကြောက်သတဲ့သားရေ။”
ကျွန်တော် မခိုးမခန့်လေးပြုံးမိလိုက်သည်။ ဇင်မင်းသူ၏ အဖေက ပညာတတ်ဖြစ်ပုံရသည်။ စကားကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင် ဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်ြပီးပြောသွားနိုင်သည်။ နောက်ပြီး စကားကိုသင့်တင်လျှောက်ပတ်အောင် မျှမျှတတရှိအောင်လည်းပြောသည်။ ပညာတတ်ပြီသပါပေတယ်ဟုကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ချီးကျူးမိလိုက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ စကားကောင်နေတုန်းဇင်မင်းသူရောက်လာကာ ယူလာသော CocaCola တစ်လုးံ ကို ဖန်ခွက်ထဲဖောက်ပြီးထည့်ကာကျွန်တော့်ကိုပေးသည်။ ထို့ နောက် ကျွန်တော့် နားတွင် လာကပ်ထိုင်သည်။
”ကဲ ဆယ့်နှစ်နာရီတောင်ထိုးတော့မယ်။ ဦးသွားရတော့မယ်သားရေ။ အချိန်ကသိပ်မရှိတော့ဘူး။ဒီနေ့ဖရဲသီးကားတွေ ၀င်ဖို့ ရှိတယ်။ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်ရဦးမှာ ။ သားတို့စကားပြောကြဦး။ထမင်းလေးဘာလေးစားပြီးမှ ပြန်နော်သား။ မနက်ဖြန်လောက်ကို သားဆီက အဖြေတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်လို့ ဦးထင်တယ်။ ကဲ ဦးကိုခွငြ့်ပုပါဦး ………”
”ဟုတ်ကဲ့ပါဦး အဒဲီ့ကိစ္စအတွက် စိတ်ချပါ။ ကျွန်တော့်ဖက်က ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နီးပါး သေချာပါတယ်”
”ဒါဆိုရင် ပိုအိုကေတာပေါ့သားရယ်.။ ဦးသွားတော့မယ်နော်သား”
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို ထားခြဲ့ပီး ဇင်မင်းသူ၏ အဖေက အပြင်ကိုကားဖြင့်ထွက်သွားသည်။သူ့အဖေထွက်သွားသည်နှင့် ဇင်မင်းသူက ကျွန်တော်အနားကပ်လာသည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်လက်ထဲ တွင်ရှိသည့် အအေးဖန်ခွက်ကို လာလုကာ မော့ သောက်လိုက်၏။ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပဲ ကြောင်အမ်းအမ်းဖြင့်သာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ သူ့လုပ်ရပ်တွေက
ကျွန်တော့်အတွက် အထူးတဆန်းဖြစ်လို့ချည်းနေသည်။ သူနဲ့ပက်သက် သမျှအရာအားလုံးကကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ဝင်စား စရာတွေချည်းပါပဲ။
”ဆရာလေး ကျွန်တော့် အခန်း ထဲသွားရအောင်။ နောက်ဆိုရင် ဆရာလေးကကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေရတော့မှာ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အခန်း အရင်လိုက်လေ့လာထား။လာ ……..သွားမယ်”
ကျွန်တော် သူဆွဲခေါ်ရာနောက်သို့ ဆိတ်ြငိမ်စွာ နှင့်လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ ဤအိမ်လေးထဲတွင်သူနှင့်ကျွန်တော် နှစ်ယောက်ထဲဆိုသည့် အသိကကျွန်တော့်ရင်ကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်အောင်ခြောက်ခြားနေစေသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် တက်လိုက် ကျလိုက်ြဖင့်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေလေတော့သည်။ မှော်အတက်ပညာတြွေဖင့် ပြုစားထားသလို ကျွန်တော့်ကို သူညို့နိုင်လွန်းအားကြီး သည်။ သူသည်ကပဲ ဆွဲေ ဆာင်မှုစွမ်း ပကားတွေ ကြီးမားနေသည်လားသို့မဟုတ် ကျွန်တော်ကပဲ သူ့ကို သိပ်ပျော်ဝင်လွန်းချင် နေသည်လား တော့မသိပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေသူ့ပေါ်တိမ်းယိုင်ယစ်မူးနေတာတော့ သေချာသည်။
အပေါ်ထပ်သို့တက်လာခြဲ့ပီး သူ့အခန်းထဲသို့ သူကဦးဆောင်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုခေါ်သွားသည်။သူ့အခန်းထဲသို့ ရောက်သော် ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးရပြန်ပါသည်။ အခန်းထဲတွင် ပြင်ဆင်ထားသည့်အ်ိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေနှင့် အခန်းပုံစံကို ကြည့်ရသည်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် ဈေးကြီးသည့်ဟော်တယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလို ခံစားရသည်။ သူ့အခန်းလေးက ရိုးရှင်းသည် သေသပ်သည်လှပ သည်။ အခန်းထဲတွင် lavender ရနံ့လေးက သင်းပြန့်စွာ လွင့်ပြန်နေသည်။ သူ့၏ မြင့်မားသည့်နေထိုင်မှုအဆင့် အတန်းကြိုမင်တွေ့ရ သော အခါကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်သိမ်ငယ်သလိုခံစားလာရသည်။ သူ့ကိုချစ်မိတာ မှားများမှားသွားပြီလား။ ကျွန်တော့်အချစ်က သူ့ကို ဒီလောက်မှနွေးထွေးမှုပေးနိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်တော် စိုးရိမ်လာသလို ရင်ဝယ်မတင်မကျကြီးခံစားလာရသည်။
”ဆရာလေး ငေးလှချည်လားဗျ။ ဒီအခန်းလေးထဲမှာ ဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော် အတူတူနေရမှာနော်။ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာလေးနဲ့ အတူတူနေရမှာ ကို ပျော်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လေ ဆရာလေးကိုခင်လွန်းနေတာလား ဒါမှမဟုတ် အကိုမရှိခဲ့လို့ ဆရာလေးကို အကိုတစ်ယောက်လိုသံယောဇဉ်တွယ်နေတာလား ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် မသဲကွဲဘူးဗျာ”
သူကျွန်တော့်ကို တွေတြွေကီးငေးကြညြ့်ပီးပြောနေသည်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေကဘာကိုဆိုလိုချင်နေတာလဲ။ ကျွန်တော်ခန့်မှန်းကြည့်သည် သို့ပေမယ် ခန့်မှန်းလို့မရ။သူ့မျက်ဝန်းတွေက နက်ရှိုင်း လွန်းသည် လေးနက်လွန်းသည် လျှို့ဝှက်လွန်းနေသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို
ဘယ်လိုနားလည်ရမှာ လဲ။ သူလိုချင်နေတာဘာလဲ။ သူကျွန်တော့်ဆီကဘာတွေ လိုချင်နေတာလဲ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ဘာတွေပေးဆပ် ရမှာ လဲ။ ကျွန်တော်သူ့စကားကို လမ်းကြောင်းလွှဲပစ်လိုက်ပါသည်။
”မင်းကုတင်ကအကြီးကြီးပဲနော် တစ်ခန်းလုံးလည်းမွှေးနေတာပဲ။ မိုက်တယ်ကွာ………”
”ဆရာလေး ကြိုက်လား ကျွန်တော့်အခန်းလေးကို”
”ကြိုက်ရင်ဆရာလေး ကျွန်တော်နဲ့ ပဲအတူတူနေတော့လေ။ ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်လေကျရင်စဉ်းစားမိတယ်သိလား။ ဆရာလေးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ကျွန်တော့်အဖေကိုဝယ်ခိုင်းလို့ ရရင်ကောင်းမှာ ပဲလို့လေ။ ကျွန်တော်ဆရာလေးကို အရမ်းလိုချင်တယ်ဗျာ”
”အင…် ………….ငါကအရုပ်မှမဟုတ်ပဲ။ ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲ။”
သူသက်ပြင်းတစ်ချက် ချလိုက်သည်။ ထို့နောက်ကုတင်ပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ်လျှဲချလိုက်၏ ။ သူ့ရင်ထဲမှာ ဘာတွေလောင်မြိုက် နေသည်လဲ။ ကျွန်တော့်မှာ ထိုးဖောက်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိလျှင်တော်တော်အဆင်ပြေမည်။ ကျွန်တော်သူ့ရင်ထဲကို ၀င်ြကည့်ချင်သည်။
စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသော သူ့အနားသို့ကျွန်တော် သွားထိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အာရုံကစားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသည့် သူ့ laptop computer လေးဆီသို့ရောက်သွားသည်။ ကျွန်တော်laptopလေးကိုကိုင်ကာ ဟိုကလိဒီကလိ ကလိနေလိုက်သည်။
အချိန်အခိုက်အတန့် မျှ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ြကားမှာ စကားသံတိတ်ဆိတ်သွားပြီးငြိမ်သက်သွားသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကွန်ပျူတာထဲကို စိတ်ရောက်နေသဖြင့် သူ့ကိုခေတ္တမျှဂရုမစိုက်မိတော့ပါ။
ပြင်ပမှ မိုးချိမ်းသြံကားရတော့မှ ကျွန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိပြန်ရလာသည်။ အပြင်ဖက်တွင်မိုးတွေမဲမှော င်နေသည်။ မကြာမီ မိုးရွာတော့မည်ထင်သည်။ ပြတင်းပေါက်မှလေတွေတဟူးဟူးတိုက်ခတ်လာသဖြင့် အသာထပြီးဆွဲပိတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် အမှတ်မထင်ဇင်မင်းသူကို တစ်ချက်ြကည့်လိုက်မိသည်။ ဘုရားဘုရား သူအိပ်ပျော်နေသည်။သူဘယ်အချိန်ကတည်းက အိပ်ပျော်နေတာ ပါလိမ့်။ ကျွန်တော် သူ့အနားသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားလိုက်သည်။ နက်မှော င်ရေးညီနေသည့် သူ့မျက်ခုံးနှစ်ခုအောက်တွင်
အနည်းငယ်အရှေ့သို့ ကော့နေသည့် သူ့မျက်တောင်လေးတွေက ဂီတ၏တူရိယာလေးတွေအိပ်စက်နေသလို ကြည့်လို့ ကောင်း လွန်းနေသည်။နူးညံ့ ချောမွတ်နေသည့် သူ့ မျက်နှာ ပြင်လေးက လောကကြီး နှင့်ခေတ္တ အဆက်သွယ်ဖြတ်ထားသည့်
ပမာ ဘာကိုမှမသိပဲ လိပ်ြပာငယ်လေးတစ်ကောင်လို အိပ်ပျော်နေသည်။ သြူကည့်လို့ကောင်းလွန်းသည်။
သူ့မျက်နှာ လေးကို တစိမ့်စိမြ့်ကည့်ရင်း ကျွန်တော့် ရင်ခုန်သံအပိုင်းအစတွေ စတင်နိုးထခုန်ပေါက်လာပါတော့သည်။ ပြဇာတ်ထဲမှ ကြိုးတန်းလျှောက်နေရသည့် ဆပ်ကပ်သမားတစ်ဦးလိုကျွန်တော့် နှလုံးသွေးတွေက တဟူးဟူးဆူပွက်လာသည်။ ကျွန်တော့်လည်ချောင်း တွေ ကွဲရှလာသလိုတစ်ခုခုကိုပဲ စိတ်ရှိလက်ရှိလုပ် ပစ်လိုက်ချင်သလိုလိုဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်လက်တွေတုန်ရီစွာ ဖြင့် သူ့ မျက်နှာ လေးပေါ်ရောက်သွားသည်။ ထို့နောက် ညီညာနေသည့် သူ့မျက်ခုံးလေးကိုအသာအယာပွတ်သပ်ြကည့်မိသည်။ုသူ့နှုတ်ခမ်းလေးက ပန်းနုရောင်ယှက်ပြေးနေကာ ရွှန်းလဲ့စိုစွတ်နေသည်။ အရစ်လိုက်အရစ်လိုက်ဖြစ်နေသည့် သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော် မက်မက်မောမော နမ်းရှိုက်ချင်လာသည်။
ပူနွေးစိုစွတ်နေသော ကျွန်တော့နှလုံးသားက တဒိတ်ဒိတ်အော်မြည်သံတွေကို ကျွန်တော်အဆက်မပြက်ကြားနေရသည်။ ကျွန်တော့် နှာ ခေါင်းနှင့်ပါးစပ်မှ အခိုးအငွေ့တွေ ထွက်နေသလို ကျွန်တော်ဂနာမငြိမ်ြဖစ်နေသည်။ ကျွန်တော် ရင်ခုန်သံတြွေကားထဲကပင် အိပ်ပျော်နေသည့် သူ့မျက်နှာ နားသို့တိုးကပ်သွားလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်မျက်နှာ ကို သူ့မျက်နှာ ဖြင့်အပ်ကာ နမ်းရန်ြပင်လိုက်သည်။ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေက ဆွဲဆောင်လွန်းနေသဖြင့်ကျွန်တော်ရုန်းမထွက်နိုင်တော့။ ကျွန်တော်သူ့ကို ရှိုက်မက်စွာ နမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်ပဲ။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ သူ့ နှုတ်ခမ်းနှင့်ထိရန် အနည်းငယ်သာလိုတော့သည့် အချိန်မှာ တော့သူရုတ်တရက်မျက်လုံးတွေ ပွင့်လာသည်။ ကျွန်တော် ကျောက်ရုပ်ြကီးတစ်ခုလို ငြိမ်သက်စွာမလှုပ်မယှက် ရပ်တန့်သွားသည်။ သူ့ မျက်လုံးလေးက ၀ိုင်း စက်ကာ ကျွန်တော့်ကို နွမ်းလျသောအပြုံးလေးဖြင့် ကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်တစ်ချက် မျက်နှာ ပူကနြဲဖစ်သွားကာသူ့ကိုအကြည့်လွှဲလိုက်ပြီး ခါးကိုခတ် မတ်မတ်လေးပြန်ထိုင်လိုက်၏။ ထို့နောက် ကုတင်ပေါ်မှထကာအခန်းအပြင်ဖက်သို့ ထွက်သွားရန်ပြင်လိုက်သည်။ သို့ပေမယ့် ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်လက်ကိုတစ်စုံတစ်ခုက လာဆွဲထားသည်။
”မသွားပါနဲ့ ဆရာလေးရယ် …………မသွားပါနဲ့ဗျာ…………………………”
သူ့ထံမှ တိုးတိုးလေးထွက်ပေါ်လာသော စကားသံလေးထဲတွင် ကြေကဲရွိပ်တို့ စွတ်စိုလျှက်ကျွန်တော့်ရင်ကို ဆွေးမြေ့နာကျင်သွားစေ သည်။ ကျွန်တော်သူ့ဖက်သို့ လှည့်ကာစောင်းငြဲ့ကည့်လိုက်သည်။ သူ့ မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့်ကို လိုလိုလားလားရှိနေမှန်း သိသာသည်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက တစ်စုံတစ်ခုကို မြိုသိပ်ထားရသလို တစ်ခုခုပြောချင်နေဟန်ရှိသည်။
ကျွန်တော်သူ့ကို တောင်းပန်သည့်အကြည့်တွေ ဖြငြ့်ကည့်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော်မှားသွားပြီလား။ သူရိပ်မိသွားပြီ ကျွန်တော်ဘာဆက် လုပ်ရပါမည်နည်း။ ကျွန်တော့်နှုတ်က ဆွံ့အလျှက်မည်သည့်စကားတစ်လုံးမျှ ထွက်ပေါ်မလာတော့ပါ။ တွေဝေနေသော ကျွန်တော့်ကို
သူရုတ်တရက်ဆွဲယူလိုက်သည်။ ကျွန်တော်သူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ ရောက်သွားမှန်းမသိရောက်သွား၏။လျှင်မြန်သော အေးစက်ခြင်းတွေ ကျွန်တော့်အသားအရည်တွေကို တဆစ်ဆစ်ကိုက်ခြဲပီးကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို တောင့်တင်းသွားစေသည်။ ယောကျာ်းလေး တစ်ယောက်၏ရင်ခွင်ထဲတွင်ပထမဦးဆုံး ခိုဝင်မိသောအခါ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်အားငယ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်မြင်လာကာ စိုးရွံ့လာမိသည်။ သူ့ရဲ့တဒိတဒ်ိ်တ်ခုန်နေသည့် ဘယ်ဖက်ရင်အုံက နှလုံးခုန်သံကိုကျွန်တော်အတိုင်းသားကြားနေရသည်။
ကျွန်တော်သူ့ရင်ခွင်ထဲမှ ရုန်းထွက်ဖို့မကြိုးစားမိတော့။ကျွန်တော် နှစ်လိုစွာ ပျော်ဝင်နေမိပါသည်။ သူ့ရဲ့နွေးထွေးမှုက ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲအထိစိမ့်ဝင်လာကာ ကျွန်တော့်ကို ရစ်ပတ်လွှမ်းခြုံလိုက်ပြီး တမြေ့မြေ့ တငွေ့ငွေ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဖန်တီးပေးလာသည်။ ထို့ နောက်သူ့ ဆီမှစကားသံထွက်လာ၏။
”ဟုတ်တယ်ဆရာလေးရယ် ဆရာလေးကိုလေ ကျွန်တော်ချစ်နေမြိပီ။ ဆရာလေးကိုလေအခုလိုမျိုးကျွန်တော် တစ်ချိန်လုံးဖက်ထား ချင်တာ။ ပြီးတော့ ဆရာလေးကို ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲကိုထည့်ပြီး ဆရာလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းချင်နေတာ။ ဆရာလေးရယ…် ……..”
ကျွန်တော်မက်မက်မောမော သူ့မျက်နှာ လေးကိုတစ်ချက်ြကည့်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို သူတင်းကြပ်စွာ ဖက်ထား သည်။
”ပြောပါဦး ဆရာလေးရယ် ကျွန်တော့်ကို ချစ်ရဲ့လား………”
”မချစ်ဘူး ……….မင်းကိုငါမချစ်ဘူး …………မင်းဟာငါ့ညီလေးတစ်ယောက်လိုပဲ။ငါ………ငါ……………..”
”မညာပါနဲ့ဗျာ ဆရာလေးက ညာနေပေမယ့် ဆရာလေးမျက်လုံးတွေက ကျွန်တော့်ကိုပြောနေတယ်။ဇင်မင်းသူကို သိပ်ချစ်ပါတယ်တဲ့”
”ပြောပါဗျာ………..ကျွန်တြော်ကားချင်လြှပီ။ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်ဟုတ်…………”
ကျွန်တော့်စကားမဆုံသေးခင်မှာ ပဲ သူကျွန်တော့်ကိုဆွဲနမ်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းနှင့်သူ့ နှုတ်ခမ်းတို့ ထိတွေ့လိုက်သည့်အခါ တီကောင်ကို ဆားဖြင့်တို့လိုက်သလိုကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်သွားရကာ ရှိန်း တိန်းတိန်းခံစားသွားရသည်။ သူ့အနမ်းလေးက ပူနွေး စိုစွတ်ကာသူ့နှုတ်ခမ်းလေးကလည်း ပိုကတ္တီပါစလေးလို နူးညံလွန်းနေသည်။ ကျွန်တော်ယောင်ရမ်း ပြီး မျက်လုံးကိုပိတ်ထား လိုက်မိ သည်။ သူ့ ရဲ့အနမ်းထဲတွင် နစ်မွန်းပျော်ဝင်နေရင်း ကျွန်တော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကို မေ့ချင်ချင်ဖြစ်သွားသည်။ သူ့အနမ်းက ချိုမြိန် ပါသည်။ ကျွန်တော့်လျှာထဲတွင် စွဲမက်စွာသူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် ထိတွေ့ ရသည်ကို အရသာတွေ့လာသည်။
ထို့နောက်ကျွန်တော်သူ့ ကို ကုတင်ပေါ်သို့လှဲချလိုက်ကာ အပေါ်မှတက်ခွလိုက်ပြီးအငမ်းမရနမ်းရှိုက်မိလိုက်သည်။ သူ့ရဲ့နွေးနေသော လျှာလေးကျွန်တော့်ခံတွင်းထဲဝင်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်သလိုယစ်မူးထုံရီေ၀၀ါးသွားသည်။ အနမ်းတစ်ပဒု၏ဆွဲခေါ်ရာကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ရောက် ရူးသွပ်စွာ ကခုန်ရင်းတစ်ယေက်နှင့်တစ်ယောက် စိုက်ြကည့်နေလိုက်မိသည်။ ထို့နောက်သူ့နှုတ်ခမ်းနှင့်ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းကို ခွာလိုက်သည်။ စေးကပ်နေသော နှုတ်ခမ်းသားတွေက ပန်းပွင့်လေးတစ်ခုအလွှာ ချင်းခွာ လိုက်သလို ကွဲကွာ သွား၏။ ထို့နောက် ကျွန်တော်သူ့နား နားသို့ တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်သည်။
Posted by Alex Aung at 9:30 AM